Teny fikasana momba ny fanahy
"Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay". Jao. 14:16
Nanatona ny fiafaran'ny asa fanompoana nataony tety an-tany i Kristy fony izy nanome ny teny fikasana momba ny Fanahy tamin'ny mpianany. Nijoro teo amin'ny aloky hazo fijaliana Izy, ary tsapany tanteraka ny vesatry ny heloka izay hitambesatra Aminy amin'ny maha-mpitondra fahotana Azy. Talohan'ny nanolorany ny tenany hatao fanatitra, dia nanambara tamin'ny mpianany ny mikasika ny fanomezana ilaina indrindra sy tena feno Izy, izay harotsany amin'ny mpanaraka Azy, dia fanomezana izay hitondra ireo tahirim-pahasoavana tsy misy fetra eo amin'izay hahazo Azy.
"Ary Izaho hangataka amin'ny Ray", hoy Izy, "ary Izy hanome Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny Fanahin'ny fahamarinana, izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hitany na fantany; fa hianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo". Jao. 14:16,17. Nanondro ny fotoana izay hahatongavan'ny Fanahy Masina ka hanaovany asa mahagaga amin'ny maha-solontenany Azy ny Mpamonjy. Hotoherin'ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Fanahy Masina ny ratsy efa niavosa nandritra ny taonjato maro (...)
Tsy voafetra ho an'ny fotoan'andro iray na ho an'ny antokom-pirazanana iray ny teny fikasana momba ny Fanahy Masina. Nambaran'i Kristy fa hiaraka amin'ny mpanaraka Azy hatramin'ny farany ny herin'Andriamanitra miasa mangina avy amin'ny fanahiny. Hatramin'ny andron'ny pentekôsta ka hatramin'izao fotoana izao, dia nalefa ny mpananatra ho an'izay rehetra nampilefitra feno ny tenany tamin'ny Tompo sy ho amin'ny fanompoana Azy. Tonga tamin'izay rehetra nanaiky an'i Kristy ho Mpamonjin'ny tenany manokana ny Fanahy Masina ho Mpananatra, manamasina, Mpitarika ary vavolombelona. Arakaraka ny maha-etiety kokoa ny niarahan'ny mpino tamin'Andriamanitra, dia arakaraka izany koa no nampahazava kokoa sy nampahery kokoa ny teny vavolombelona nataony ny amin'ny fitiavan'ny mpanavotra sy ny fahasoavany mamonjy. Ny lehilahy sy ny vehivavy izay nandray tombontsoa betsaka tamin'ny fanatrehan'ny Fanahy Masina nandritra ireo taonjato lava nisian'ny fanenjehana sy ny fizahan-toetra, dia toy ny famantarana sy fahagagana teo amin'izao tontolo izao. Teo anatrehan'ny anjely sy ny olona no nanehoany ny hery manovan'ny fitiavana manavotra." - VM, tt. 44,45